Minoa amin'ny nofinofinao Quote
Manenjika nofinofy Quotes
Teny namboarana nofinofy
Quotes nofinofy nofinofy
Sokafy ny sainao
Tadiavo ny teny nofinofisinao
Quotes momba ny fanatrarana nofinofy
Quotes momba ny nofy sy ny tanjona
Teny momba ny tanjona sy nofinofy
Teny fohy nofinofy
Makà fotoana hankalazanao izay anananao. - Anonyme
Makà fotoana hankalazanao izay anananao. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Ny tena namana dia ihomehezanao ny tantaranao na dia tsy dia tsara loatra aza izy, ary mangoraka ny olana mahazo anao na dia tsy dia ratsy loatra aza izany. - Anonyme
Ny tena namana dia ihomehezanao ny tantaranao na dia tsy dia tsara loatra aza izy ary mankasitraka ny olana mahazo anao…
Raha natao io dia ho izay. - Anonyme
Indraindray mila mianatra mianatra mamela izany ianao! Eo amin'ny fiainana dia mahita olona, ​​zavatra ary toerana isika,…